Garabka midig oo ku kala qeybsan fikirka markhaatiga dahsoon - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna Jan Björklund. sawir: Stefan Jerrevång/TT
Garabka midig oo ku kala qeybsan fikirka markhaatiga dahsoon
Björklund: 2 sano hortood xisbiyada badankood wey diiddanaayeen
La daabacay onsdag 11 oktober 2017 kl 14.51
Xisbiga Moderaterna ayaa taageero kaga helaya qaar ka mid ah xisbiyada garabka midig fikirkiisii in xeerka lagu suurtageliyo inuu markhaatigu uu dacwooyinka maxkammadaha kaga qeybgeli karo qarsoonaan (dahsoonaan). Hase yeeshee xisbiyada oo dhan ayaan isku raacsaneyn fikirkaa.
Hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna (L) Jan Björklund ayaa ku dhawaaqay inuu yahay fikir uu taabac-san yahay.
–Dib ayaan uga fekeray. Waxaana ay ku saab-san tahay dembiyada culculus ee ku soo xoogeeysaneya qaar ka mid ah xaafadaha dibadda ka ah magaalooyinka waaweyn. Dhallin-yaro is toogata oo dabadeed cabsi gelisa markhaatiga, sida uu sheegay Jan Björklund.
Hoggaanka xisbiga Liberalerna ayaa iminka ku mideey-san in la suurtageliyo markhaati qarsoon. Waxaana lagu qori doonaa barnaamijka cadaaladda xisbiga kolka uu xisbigu isugu yimaado kullan weynihiisa xilliga dayrta.
Xisbiga Kristdemokraterna wuxuu muddo saddex sannadood iyo bar ah u ololeeynayay fikirkaa. Andreas Carlson, af-hayeenka dhanka siyaasadda cadaaladda ee xisbiga KD.
–Maanta waxaa dadka laga cabsi geliyaa iney markhaati kacaan oo ciddii markhaati noqota waxaa soo gaara dhibaatooyin handadaad, iyo jir dil. Waxaannu kaloo og-soonnahey in aanu sidii la doonayey u shaqeenayn nidaamka difaaca markhaatiga, sida uu sheegay.
Waa meesha ey xisbiyada garabka midig ku kala fikir duwan yihiin. Xisbiga Centerpartiet (C) ayaa ka soo hor-jeeda iney maxkammadaha ka markhaati furaan cid xogteeda la qariyey.
–Waxay iila muuqataa inay tahay farafareeyn ballaaran oo lagu sameeyneyo mabaadiida howlaha cadaaladda, marka waana ka shakisannahey, sida uu sheegay Johan Hedin, af-hayeenka siyaasadda cadaaladda ee xisbiga Center-ka.
Dawladda ayaa sidoo kale ka soo hor-jeedda fikirka markhaatiga dahsoon. Halka uu xisbiga Sverigedemokraterna taabac-san yahay in la qaato. Waxaase jirta in aaney aqlabiyad ku laheyn baarlamanka saddex xisbi ee ka mid ah xisbiyada garabka midig (Alliansen) iyo xisbiga SD haddii aannu xisbiga Center-ku ku taageerin.
Hase yeeshee diidmmada xisbiga Centerku maahan mid muqaddis ah, sida uu aamin-san yahay hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna.
–Muddo laba sannadood ey ka soo wareegtay xisbiyada badankood wey ka soo hor-jeedeen fikirkaa. Anigu dib ayaan u fekeray, waxaanan u fahmeyaa in qaar kalena ey dhabbada ku soo jiraan oo ey ka fekereyaan, waa inaannu xaqiiqda jirta ku xisaabtanno ayuu carrabka ku adkeeyay Jan Björklund.
Fikirkan ayaa muhiimad ballaaran ugu fadhiya xisbiga Kristdemokraterna, lagana yaabee inuu noqdo su’aal doodaha doorashada looga xaajoodo.
–Haa. Arrinkani waa su’aal aan filayo iney dad badan saameeyso. In dad laga cabsi geliyo iney markhaati kacaan, iyada oo ciddii doorata inay markhaati kacdo loo geeysto handadaad iyo jir dil. Waxaa sidoo kale muuqda in aannu shaqeenayn nidaamka difaaca markhaatiyada, markaa waa in la tijaabiyo hab cusub oo hor leh, in markhaatiyada loo suurtageiliyo iney qarsoodi ku markhaati kacaan. Waa mid aannu diyaar u nahey inaannu doorashada geeyno, sida uu sheegay Andreas Carlson, af-hayeenka dhanka siyaasadda cadaaladda ee xisbiga KD.
Ma loo baahan yahay inuu markhaatigu yahay mid magac la', qarsoon?